Ku iibso Bitcoin (BTC) nidaamka PayPal Si Fudud | Paxful
Ku iibso Bitcoin (BTC) lacagta PayPal
Sida Bitcoin loogu iibsado PayPal
PayPal waa mid kamid ah nidaamyada lacag dirista oonleenka ah ee ugu waawayn ee aduunyada ka jira oo ah badalka jeegaga iyo dalabaadka lacagaha. waxay ku siinaysaa qaab fudud oo degdeg ah oo lagu diro laguna helo lacagaha aduunka, iyo sidoo kale inaad lacagaha dirto markaad doonto, meeshaad doonto.
Ku iibsashada Bitcoin baaqiga PayPal ayaa hadda lagu heli karaa suuqa kala iibsiga ee Paxful. waxaad heli kartaa yaboohyo kaladuwan kuwaas oo aqbalaaya PayPal oo ah qaabka lacag bixinta ay doonayaan ee barteena. Haddii aadan heli yabooh kugu haboon, waxaad markasta abuuri kartaa yabooh si aad usoo jiidato isticmaalayaasha doonaaya inay BTC ku gataan PayPal.
Si aad u hesho khibrad ganacsi oo amaan abdan, iibiyaasha qaar ayaa kaa dooni kara talaabooyin dheeraad ah si ay hubiyaan aqoonsiga dadka ganacsiga la samaynaaya. Talaabooyinkaan ayaa kaa dalban kara inaad keento dukumiintiga qaar sida kaararka aqoonsiga, sawirka wajiga, iyo/ama sawirka shaashada. Tani waxay hoos u dhigaysaa khatarta khiyaanada lacagta iyo adeegsiga mamnuuca ah ee koontooyinka PayPal ka, taasoo ka dhigaysa Paxful meel amaan ah.
Shuruudaha iyo xeerarka yabooha ayaa xoogaa ka duwanaan kale kuwa yabooh kale, marka xaqiiji inaad akhrido aadna aqbasho shuruudaha iibiyaha kahor intaadan ganacsiga bilaabin. Waxaad adeegsan kartaa aaladeena oonleenka ah ee Xisaabiyaha Bitcoin si aad u hesho qiyaasta cadadka BTC ga aad ku iibsan karto cadadka lacagtaada. Wixii xog dheeraad ah, waxaad daawan kartaa muuqaalkaaneena dulmarka ee ku aadan sida Bitcoin PayPal loogu iibsado Paxful.
Haddaan nahay Paxful, waxaan diirada saaraynaa inaan fududayno qaabka aad lacagtaada PayPal ugu badalanayso Bitcoin adoo adeegsanaaya suuqeenaa amaanka ah ee ku habboon isticmaalaha ee kala iibsiga tooska ah. Ka fiiri ganacsiga ugu fiican maanta.